Tantara – fanilo
Ny Vazimba sy ny tantarany: Mifono ny toe-tsaina maha gasy
Na angano, na lovantsofina izay mipaka amina��ny tantaram-pirenena mihitsy dia saika hahatarafana avokoa fa ireo fahendrena sy soatoavina naha malagasy sy nampandroso azy fahagola dia saika nolovaina tamina��izany antsoina hoe Vazimba izany avokoa. Maro sy mifamaofao be ihany anefa ireo raki-tsoratra momba izany atao hoe Vazimba izany, hany ka lasa marobe ireo fiheverana sy fitsarana mandratsy endrika ity razambena��ny malagasy, araka ny voarakitra��ireo tantara momba ana��i Madagasikara ity. Misy ireo raki-tsoratra sasany aza moa milaza mihitsy fa fanahy ratsy ny Vazimba. Ao ireo nandrakitra fa ratsy endrika, mampatahotra sy mampandositra ny Vazimba. Ny matetika re koa dia hoe fohy kely sy tsy ampy refy.
Rafohy sy Rangita : Ireo mpanjaka namorona ny A� Fanjakana arindra A�
Nanana ny nampiavaka azy ireto mpanjaka roa ireto, raha ny tantarana��ny Fanjakana merina, tany amina��ny taona 1500. Izy ireo no nametraka ny lalA�na��ny a�?Fanjakana arindraa�?, raha ny lovantsofina sy ny tantara. Nilamina ny fanjakana vokatra��io fihetsika io satria tsy azo zarazaraina ny tanya��
Ny mponina voalohany teto Madagasikara
Misy tantara momba ny olona nonina voalohany teto Madagasikara amina�� ireo toerana maro manerana ny Nosy. Ireo fitantarana teo aloha, dia karazana�� ny nitantara vilana ihany momba azy ireny. Nolazaina�� ireo mpanoratra tantara fa olona tsy tonga lafatra na ara-tsaina na ara-batana hono ny mponina voalohany teto amintsika.
Savaranonandona�� ny tantarana�� i Madagasikara
Fototra iray hijoroana�� ny maha-Firenena ny tantara. Izay tsy mahatadidy ny lasany rahateo, hoy ny fomba amam-pitenenana, tsy mahafehy ny ho aviny.